Apple dia manasa ireo mpampiasa macOS Big Sur hampiasa Safari 15 amin'ny beta | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manasa ireo mpampiasa macOS Big Sur hampiasa Safari 15 amin'ny beta
Araka ny efa fantatrao raha manaraka ny vaovao momba an'i Apple ianao ary indrindra ny an'ny Mac, dia nanangana kinova Safari vaovao tamin'ny macOS Monterey ilay orinasa amerikana. Safari 15 Beta dia misy raha manandrana ny kinova rindrambaiko vaovao ho an'ny Mac ianao. Na izany aza, te handroso bebe kokoa i Apple ary mamporisika ny mpampiasa azy hanandrana io fampiasa io koa raha manana macOS Big Sur sy Catalina.
Ho an'ny mpampiasa sasany tsy tian'izy ireo loatra izany ny endrika safari vaovao ao amin'ny macOS Monterey. Ity kinova an'ny Safari 15 Beta ity dia azo esorina ary averina amin'ny lasa teo aloha. Mpampiasa maro no nitaraina momba ny sasany amin'ireo fanovana natao ary noho izany, mety ho izany Apple dia mamporisika ny mpampiasa hanandrana ity endrika vaovao ity amin'ny tranokala malaza indrindra. Mamporisika ny fametrahana azy amin'ny kinova macOS Big Sur sy Catalina izy ireo, fa tsy Monterey irery ihany.
Tsarovy fa ny fiasan'ny ampifandraiso ny bara adiresy amin'ny bara tab, manafina bokotra isan-karazany amin'ny interface tsara. Toy izany koa, ny fitantanana ny takelaka dia niova be, izay nahasosotra ireo mpampiasa maro, araka ny efa nolazainay taminao teo.
Efa fantatrao fa misy ny kinova an Fijery teknolojia Safari, kinova hafa amin'ny tranokala web an'ny Apple mifantoka amin'ny mpamorona, satria ao anatin'izany ny fiasa beta izay mbola tsy misy ao amin'ny kinova Safari. Na izany aza, ny famoahana Safari 15 dia kinova beta mahazatra. Eny tokoa, ho an'ireo mpampiasa voafantina amin'ny programa AppleSeed.
Indrisy anefa, tsy misy fomba hisoratana anarana amin'ny programa AppleSeed, satria Apple mifidy an-tsokosoko ireo mpampiasa hanasa ny orinasa hitsapana ny rindrambaiko beta. Ireo vahiny dia handray mailaka miaraka amin'ny antsipiriany hampidinana ny Safari 15 beta avy ao amin'ny Tranonkala AppleSeed.
Raha iray amin'ireo voafidy ianao, azafady lazao anay ny fandehany Ary manao ahoana ity kinova vaovao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Apple dia manasa ireo mpampiasa macOS Big Sur hampiasa Safari 15 amin'ny beta
Torricelli dia hoy izy:
Tamin'ny Alakamisy dia niseho tamin'ny Mac-ko fa misy fanavaozana Safari misy. Nanavao azy aho ary nanomboka teo dia tsy mandeha tsara. Mameno ny pejy izy io nefa milaza fa manana olana izy, mamerina azy indray mandeha na indroa, ary avy eo dia miseho ny hafatra diso.
Nofafako ny Cookies ary nosakanako ireo fanitarana. Nanokatra pejy manokana aho ... Tsy raikitra io.
Manana Safari 15.0 napetraka aho ary tsy nisy nanoratra ahy na nanamarika ny kinova Beta.
Valiny tamin'i Torricelli
MacOS Monterey beta 4 misy Live Text azo alaina ho an'ny Intel sy M1 Macs